Ebumnuche iji nwee obi ụtọ ị ga njem Ireland | Akụkọ Njem
Ebumnuche iji nwee obi ụtọ njem na Ireland
Susana Garcia | | Getaways Europe, General, Ireland
Ireland Ọ bụ mba na-adọta ọtụtụ, ọ bụghị naanị maka onyinyo ya nke obodo oge ochie, ugwu ugwu na nnukwu ụlọ nkume, mana maka ọdịbendị ya na maka ihe niile anyị nwere ike ịchọpụta na njem Ireland. O doro anya na ọ bụ otu n'ime ebe anyị ga-achọ ịnụ ụtọ n'oge na-adịghị anya, ma ọ bụrụ na ịnwee ohere, echefula ileta ya, n'ihi na Ireland nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye.
Ireland, nke a maara dị ka Isuo EmeraldỌ bụ ebe nnabata, maka ọdịbendị ya na ndị bi na ya. O doro anya na anyị ga-enwe ọtụtụ ihe anyị ga-eji ya mee. Ma anyị na-elekwasị anya na obodo ya ma ọ bụ na-ekpebi ịhapụ onwe anyị na obodo ndị mara mma dị n'ụsọ oké osimiri ma ọ bụ n'ime obodo, ahụmịhe ahụ ga-adị egwu. Ma ọ bụrụ na-amasị gị okirikiri na-ewe ume gị pụọ, ị ga-enwe otu ihe mere na-aga na-achọ tiketi ka adaa Ireland.
1 Obodo ya na-atọ ụtọ
2 Ndị ọzọ dị na mbụ
3 Ya mmanya na biya
4 Castlọ ochie ahụ
5 Ala ndị mara mma
Obodo ya na-atọ ụtọ
Inggagharị na Ireland abụghị naanị ịlafu na ubi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ịsọpụ ọnụ ọnụ ugwu mara mma n'akụkụ ụsọ mmiri. Travelga mba a pụtakwara ịchọpụta obodo ọgbara ọhụrụ ebe enwere akụkọ ihe mere eme nke Ireland, dịka ọ na-eme Dublin, isi obodo. Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ otu n'ime ebe ndị dị mkpa, obodo a mara mma na-eju anyị anya n'oge ọ bụla. Mpaghara ochie, pubs na ụdị Irish kachasịkarị na Temple Bar ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ biya biya Guinness. Dublin nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye, ma karịa ihe niile ọ nwere aha ọma nke ịbụ obodo na-adị ndụ ma dị ndụ, yabụ echefula ohere ị ga-eleta ya kpamkpam. Ọ bụ ezie na nke a bụ obodo ya kachasị mkpa, enwerekwa ndị ọzọ kwesịrị ịhụ, dị ka Galway, Cork, Belfast ma ọ bụ Killarney.
Ndị ọzọ dị na mbụ
Agbanyeghi na enwere otutu ndi ozo, anyi aghaghi ime ka otu nke na-abia mba uwa. Anyị na-ezo aka na ezumike mba nke Ireland, St. Patrick, nke a na-eme na March 17 na mba ahụ, na-eme ụdị mmemme niile, ememme na mmemme. Ọ bụrụ n’inwere ike ịme ụbọchị nke njem a dabara na ezumike a na-atọ ọchị nke ihe niile na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, echefula ya, n’ihi na a na-eme oriri n’ebe niile. N'ezie, anyị ga-eburu n'uche na n'oge ụbọchị ezumike nke mba a ihe niile dị oke ọnụ, ọkachasị ebe obibi, n'ihi na ọ nweghị onye chọrọ ịhapụ ezumike a.
Ya mmanya na biya
Na England na Ireland anyị pụrụ ịhụ ọdịnala nke pubs with vintage emetụ ma ọ bụ vintej, na amara nke siri ike ịkọ. A na-ere mmanya ndị a ebe niile n'obodo na obodo, n'ihi na ọ bụghị oge ọjọọ ka a nwaa iko mmanya gbara ọchịchịrị ma ọ bụ obere obere ịnyịnya ibu, ebe anyị agaghị echefu na ihe ọ thatụ drinkụ a gbanyere mkpọrọgwụ sitere ebe a. Mgbe ị bịarutere n'ụlọ mmanya, ọnụọgụ biya ị nwere ike ịhọrọ, nwere ike iju gị anya, dịka ọ dị na London pubs, ma nwee nnukwu omenala mmanya a. Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịhọrọ n'ihi na ị maghị ụdị ndị ahụ, ị ​​nwere ike ịjụ ndị Irish, ebe a na-ekwu na ha nwere ezigbo enyi na ezigbo mmadụ, ha agaghị echefu ohere iji gosipụta ihe ọmụma ha gbasara biya. Ma ọ bụrụ na ị nwere ike, echefula ileta ụlọ ọrụ Guinness na Dublin ịnwale biya a.
Castlọ ochie ahụ
Na Ireland enwere ọtụtụ ụlọ elu ileta. N'ezie, enwere ike ịme ụzọ iji gaa leta ndị kachasị mkpa ọ ga-abụkwa njem ogologo. N’ezie enwere ụlọ kariri 300, ụfọdụ echekwara nke ọma ma ka bi n’ime ha na ndị ọzọ taa ka echekwara na mkpọmkpọ ebe ma ka na-eguzo. Offọdụ ndị kachasị mkpa bụ nke Malahide, nke ekwuru na o nwere mmụọ nke ya, nke Dunluce, nwere echiche mara mma banyere ugwu, ma ọ bụ nke Blarney, nke bụ na ọ bụrụ na anyị susuo okwute ahụ anyị ga-enweta onyinye nke ikwupụta okwu. Obi abụọ adịghị ya na e nwere ụlọ ndị na-adọrọ mmasị iji dee akwụkwọ n'ime ha, n'ime ha ọ bụghị naanị na nnukwu ụlọ ahụ n'onwe ya na-adọrọ mmasị, mana mgbe ụfọdụkwa ọmarịcha ala ndị gbara ha gburugburu na nke a na-echekarị, ka ndị ọbịa wee nwee ike iche ihe ebe ahụ dị ka narị afọ gara aga afọ.
Ala ndị mara mma
Ọ bụ ezie na ịgagharị n’obodo ndị dị ka Dublin bụ ezigbo echiche n’ihi ọtụtụ ihe anyị nwere ike ịhụ na obere oge, nke bụ eziokwu bụ na Ireland nwere ọdịdị dị egwu anyị na-ekwesịghị ịhapụ. A oké echiche bụ gbazite ụgbọ ala ma gaa ebe di iche iche, n’enweghi oso ma mara obere obodo di nma. Coastsọ oké osimiri, ya na nnukwu ọnụ ọnụ ugwu, bụ otu n'ime isi ebe ndị njem nleta na-agakarị, kamakwa n'ime ime, yana nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ubi, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ihu ala dị egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ebumnuche iji nwee obi ụtọ njem na Ireland
Isi njem nleta na Mongolia